Clam Elite, onye ozo nke ANC site n'aka Fresh´n Rebel | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | General, Nyocha
Nkagbu mkpọtụ na-arụsi ọrụ ike, nke a kacha mara amara ANC n'ihi na acronym ya na Bekee, ọ ghọọla nkwupụta maka ndị na-emepụta ngwaahịa ngwaahịa ọdịyo nke na-arịwanye elu nke ụbọchị ahụ, nke mere na mbipụta ọhụrụ nke Fresh'n Rebel, nke siri ike na site na ebe a ka anyị soro mgbe niile, yabụ anyị enweghị ike ịhapụ nhọpụta ahụ.
Anyị na-egosi gị klaasị ọhụrụ Elite na Fresh´n Rebel, ekweisi na ANC na ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ekweisi ntị ọhụrụ nke Fresh'n Rebel.
3 Nkagbu mkpọtụ na usoro
4 Personal Sound ngwa na ụda olu
Fresh´n Rebel na-anọgide na-eme ka ọ bụrụ isi, ma na agba na ihe. Ndị a Clam Elite na-agbaso nkwekọ nke agba, na-enye na ụda ojii, ọcha na acha anụnụ anụnụ. N'otu ụzọ ahụ, o nwere usoro plastik na ihe ndozi ndị na-eme ka ọla. Agbanyeghị, nke a eyighị ka ọ ga-ewute ngụkọta ụlọ ahụ, nke na-adị oke mma na mma. N'agbanyeghị nke a, n'ihi plastik ahụ ka mma na ọkwa nke ọkụ. Ndị a Clam Elite adịghị arọ na ojiji na-aga n'ihu na ahụmịhe anyị.
Gụnyere nylon ejiri eriri USB-C mee ihe
Gụnyere 3,5mm Jack port na naịlọn braid AUX cable
Gụnyere ebu akpa
Ejiri akwa mee akwa isi ya ma nwee akwa ụfụfụ ebe nchekwa dị n'ime iji mee ka ọ dị mfe itinye. O doro anya na anyị nwere sistemụ telescopic nkịtị na ụdị isi a iji nabata isi anyị. Maka akụkụ ya, ekweisi na-ekpuchi ntị ahụ kpamkpam nwere mkpuchi yiri akpụkpọ anụ, na-agbagharị na nnwere onwe ịgagharị ma na-enwe ike ịpịkọta ya.
Ke ikpehe emi anyị chọtara ogwe aka na-anụ ihe, yana bọtịnụ ntinye / mkpọchi ANC, bọtịnụ ON / Gbanyụọ na ọdụ USB-C nke anyị ga-akwụ ụgwọ ngwaọrụ ahụ. Mkpokọta dị naanị gram 260.
O doro anya na, dị ka ekweisi ikuku na ha bụ, anyị nwere Bluetooth maka njikọta na ngwaọrụ ahụ, n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike iri uru nke njirimara nke ngwa ụda ya nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. N'akụkụ a, Clam Elite nke Fresh´n Rebel nwere Nkagbu Noise Noise, na-enye ahụmịhe kachasị elu. Nke a na-akwado usoro nke usoro anyị ga-ekwukwa banyere ya ma emechaa.
Anyị nwere ọdụ ụgbọ USB-C nke anyị ga-esi akwụ ụgwọ ekweisi na nke ahụ Ha nwere 40 awa nke nnwere onwe na egwu egwu, nke a ga-ebelata ruo awa 30 mgbe anyị megharịrị mkpọtụ mkpọtụ. Ikike zuru oke nke Clam Elite nke Fresh'n nnupụisi ga-ewe anyị ihe ruru elekere anọ, yabụ anyị nwere ike ikpebi na anyị enweghị ụdị ụgwọ ọ bụla. N'agbanyeghi nke a, nnwere onwe gbasaa ebe niile nke na anyị anaghị ahụ ọnọdụ anyị nwere ike ịchọ ya. Ka o sina dị, Ka anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri Jack 3,5mm, anyị nwere ike iji ha n'ụzọ ọdịnala ma ọ bụrụ na anyị enwee nnwere onwe.
Nkagbu mkpọtụ na usoro
Na nke a Ọhụrụ Rebel ekpebiela iji melite ụdị nke Clam nso na ụdị "Elite" a ma maka nke a ọ nyela anyị nkagbu mkpọtụ dijitalụ nke kwere nkwa iru 36 dBi. N'ime ule anyị, ọ gosipụtala onwe ya zuru oke, opekata mpe n'ụdị nhichapụ mkpọtụ zuru oke. Ihe gbanwere mgbe anyị gbanwere na ọnọdụ ọzọ.
Mgbasa ụda mkpọtụ: Ọ ga-akagbu mkpọtụ niile yana ikike kachasị nke Clam Elite nyere ruo 36 dbi
N'ihe banyere Ọnọdụ Ambient anyị na-ahụ otu ọ nwere ike isi metụta ụda nke egwu anyị na-ege. Agbanyeghị na ọ kwụ ọtọ nke ọma, enweghị m mmasị na ụdị 'uzo' dị otu a, nkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ nke ọma, ana m akwado ka ị jiri ya na gburugburu ebe nchekwa. O sina dị, Tụle otú a ma ama ntị gị muffs bụ, anyị nwere ezigbo ogo nkewapụ iche mgbe anyị anaghị arụ ọrụ ọrụ a.
Personal Sound ngwa na ụda olu
Ndị a Clam Elite na-esonyere ọrụ pụrụ iche nke bụ ịhazi ụdị ụda site na ngwa dị maka n'efu maka iOS na gam akporo. Ozugbo anyị mekọrịta Clam Elite anyị, ihe dị mfe site na ijide bọtịnụ ON / OFF, usoro mmezi ga-emeghe nke ga-ewe ihe dị ka nkeji atọ ma nke ahụ amachaghị. Ozugbo ajụrụ ajụjụ a, a ga-ekenye profaịlụ na Clam Elite anyị na-agaghị echekwa na ekwentị mana na ekweisi n'onwe ha, na anyị nwere ike ịchọpụta ma gbanwee mgbe ọ bụla anyị chọrọ na-enweghị ịtọ ntọala ahụ mgbe anyị na-eji ha.
Usoro ogwe aka iji jikwaa ọdịnaya na olu multimedia
Nchọpụta nchọpụta iji kwụsịtụ egwu na akpaghị aka
Maka akụkụ ya, ụda ụda dị iche iche nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị atụgharịrị ha ma ọ bụrụ na ọ bụghị. N'okwu m, achọpụtara m ọnụnọ dị ukwuu nke bass mgbe emechara ya, n'ihi ya, m họọrọ ọnọdụ ọkọlọtọ, ka anyị kwuo na ha rutere nke ọma dị ka ọkọlọtọ. Anyị amaghị na ha nwere koodu aptX. Ha na-enye anyị ezigbo arụmọrụ na bass na mids, o doro anya na ha na-ata ahụhụ na elu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ahapụ egwu egwu, dị ka ọ dị na ọtụtụ ekweisi nke ụdị a. Ikwesị ntụkwasị obi nke ụda na-adịghị mma mgbe anyị megharịrị ụdị nkwụsị kagbuo, ihe na-adabakwa n'ime nhazi nkịtị.
Anyị na-ezute ndị a Fresh'n Rebel ngwaahịa gbara gburugburu, ike ya dị iche na ndị na-adịghị ike, ọkachasị n'ihi na ahụmịhe nke njikọta, ntugharị na nkasi obi dabara na ogo ọdịyo, nke bụ ezie na anyị anọghị na ọkwa dị elu, na-enye ụkpụrụ dị elu nke ndị ọrụ ahụ. afọ ojuju. Ọnụ ego mmalite ahụ bụ euro 199,99 na isi ire ahịa dịka Amazon, El Corte Inglés na Fnac.
Mgbanwe ikpeazụ: 9 June nke 2021
Ngwa na imewe echepụtara nke ọma
Ohere nke ịgbanwe audio na ngwa
Ezigbo njikọta na ahụmịhe ọrụ
Ọnọdụ Ambient nwere ike ịbawanye mma
Ha nwere ike inye mmetụta nke ntakịrị nkwụsi ike n'ihi ịdị nfe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Clam Elite, onye ozo nke ANC site n'aka Fresh'n Rebel
Amazon ikwughachi Gosi 10, ihuenyo, ụda na ihe ọhụrụ, ọ bara uru?